Rag u sharaxnaa Qabashada Xilka Ra’izul Wasaaraha Somalia oo ka dhoofay Muqdisho kadib markii ay quusteen! - iftineducation.com
Rag u sharaxnaa Qabashada Xilka Ra’izul Wasaaraha Somalia oo ka dhoofay Muqdisho kadib markii ay quusteen!
iftineducation.com – Xubno Siyaasiyiin ah oo intooda badan ka yimid Qurbaha ayaa ku hungoobay damacooda la xariiray in loo Magacaabo Ra’izul Wasaaraha Xukuumada Soomaaliya, waxaana hada xubnahaasi qaarkood bilaabeen in ay dib uga laabtaan Muqdisho.
Tan iyo markii Baarlamaanka Soomaaliya ay kalsoonida kala noqdeen Ra’izul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdi Wali Sheekh Axmed, waxaa Muqdisho kusoo qul qulayay xubno Siyaasiyiin ah oo kasoo jeeda Beesha Daarood kuwaa oo damac uga jiray in loo Magacaabo Xilka R/Wasaaraha.
Liiska Dhoor Xubnood oo isku soo sharaxay qabashada xilka Ra’izul Wasaaraha Soomaaliya ayaa ugu dambeyn waxaa lasoo sheegayaa in Madaxweynaha uu kasoo dhax xushay Safiirka Soomaaliya u fadhiya Dalka Mareykanka Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo mar R/Wasaare kasoo noqday Dowladihii KMG.
Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde waxaa ka dhoofay Xubno Siyaasiyiin ah oo damac ugu jiray qabashada Xilka R/Wasaaraha Soomaaliya, kuwaa oo ogaaday in Madaxweynaha iyo kooxdiisa ay xusheen Cumar Cabdi Rashiid.
Madaxweynaha Soomaaliya Xaasan Sheekh Maxamuud ayaa saacadaha soo aadan la filayaa in uu si rasmi ah u magacaabo R/Wasaaraha Soomaaliya oo loo badinayo in uu noqon doono Cumar Cabdi Rashid Cali oo shalay Muqdisho soo gaaray.
Nimanka Ka Dagaalamaya Dhuusa Mareeb Waa La Yaqaanaa, Waa Qab qablayaashii Shabeelada hoose Looga Soo Adkaaday”
Wariye-yaasha oo goor dhow looga yeeray Madaxtooyada Somaliya, xilli dhegta loo wada taagaayo magacaabista Raiisal Wasaaraha